Chilblains (သွေးကြောရောင်ရမ်း၍ကိုက်ခဲခြင်းတစ်မျိုး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Chilblains (သွေးကြောရောင်ရမ်း၍ကိုက်ခဲခြင်းတစ်မျိုး)
Chilblains (သွေးကြောရောင်ရမ်း၍ကိုက်ခဲခြင်းတစ်မျိုး) ကဘာလဲ။
Chilblains – CHILL-blayns လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ အအေးဒဏ်၊ လေအေးတွေနဲ့ မကြာခဏထိတေ့ွရတဲ့အခါ ဖြစ်လာတတ်တဲ့ အရေပြားရှိ သေးငယ်သောသွေးကြောငယ်လေးများ ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။ Pernio လို့လည်းသိပြီး ခြေလက်တွေမှာ ယားယံခြင်း၊ အနီကွက်များထခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ အရည်ကြည်ဖုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် တစ်ပတ်ကနေ သုံးပတ်အတွင်း ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရာသီဥတုပြန်လည်နွေးထွေးလာပါက ပိုကောင်းနိုင်ချေရှိတယ်။ နှစ်နဲ့ချီပြီး ရာသီအလိုက် ရောဂါပြန်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ကုသမှုတွေမှာတော့ အအေးဒဏ်ကနေကာကွယ်ခြင်းတွေ၊ လက္ခဏာတွေသက်သာဖို့ လိုးရှင်းခရင်သုံးခြင်းတွေပါနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ အမြဲထိခိုက်ခြင်းမဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့် မကုသဘဲထားပါက ရောဂါပိုးဝင်ပြီး ပြင်းထန်သောထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။
အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ အအေးဒဏ်မခံရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ပြီး နွေးနွေးထွေးထွေးဝတ်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်။
Chilblains (သွေးကြောရောင်ရမ်း၍ကိုက်ခဲခြင်းတစ်မျိုး) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပြီး ကလေးတွေရော၊ လူကြီးတွေရော ဖြစ်နိုင်ချေအတူတူပဲဖြစ်တယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအတွက် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
Chilblains (သွေးကြောရောင်ရမ်း၍ကိုက်ခဲခြင်းတစ်မျိုး) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အရေပြားပေါ်၊ အထူးသဖြင့် ခြေထောက်နဲ့ လက်တွေမှာ သေးငယ်ပြီးယားယံသောအနီစက်များထွက်ခြင်း
အောက်ပါအခြေအနေများဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ပြပါ –
ပြင်းထန်ခြင်း၊ သို့ မကြာခဏဖြစ်နေခြင်း
အဖျားကြီးခြင်း 38C (100.4F) နှင့်အထက်
Chilblains (သွေးကြောရောင်ရမ်း၍ကိုက်ခဲခြင်းတစ်မျိုး) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အကြောင်းအရင်းအတိအကျကိုတော့မသိကြပါဘူး။ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့အအေးဒဏ်ကိုပုံမှန်မဟုတ်တုံ့ပြန်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အအေးဒဏ်ခံရပြီး ပြန်လည်နွေးထွေးသွားတဲ့အခါ ခန္ဓါကိုယ်အရေပြားက သွေးကြောငယ်လေးတွေက အနီးမှာရှိတဲ့ သွေးကြောကြီးတွေထက် ပိုမြန်မြန်ကျယ်ပြန့်သွားတတ်တယ်။ ထိုအခါမှာ အနားတဝိုက်က တစ်သျူးများသွေးငတ်တတ်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Chilblains (သွေးကြောရောင်ရမ်း၍ကိုက်ခဲခြင်းတစ်မျိုး) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကြပ်တည်းသော သို့ အရေပြားလေးအေးထိနိုင်သော အဝတ်အစားများဝတ်စားခြင်း။ ချမ်းအေးစိုစွတ်သောရာသီဥတုတွင် ကြပ်တည်းသောအဝတ် သို့ ဖိနပ်များဝတ်စားခြင်း။ အအေးဒဏ်ထိနေတဲ့ အရေပြားမှာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုရှိပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်၊ နှင့် အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်း။ အရပ်နှင့် သင့်လျော်သော ကိုယ်အလေးချိန်ထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုနည်းနေသူများမှာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများသလို၊ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေနဲ့ ကလေးတွေထက် ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ ရာသီဥတု – အေးမြခြောက်သွေ့သောနေရာတွေမှာဖြစ်ခဲပါတယ်။ ထိုဒေသရှိလူတွေဟာ အအေးဒဏ်မထိရအောင် ပိုလုံခြုံစွာဝတ်စားသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ စိုစွတ်အေးမြသောနေရာမှာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများပြီး နိုဝင်ဘာမှ ဧပြီလအတွင်းအဖြစ်များတယ်။
သွေးလည်ပတ်မှုမကောင်းခြင်း။ သွေးလည်ပတ်မှုမကောင်းသူတွေမှာ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကို ပိုမခံနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ချေများနိုင်တယ်။
ရောဂါရှိခြင်း။ ရောဂါရှိသူတွေဟာ ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ ရောဂါနှစ်ခုစလုံးက ရောင်ရမ်းစေနိုင်ပြီး ရောဂါမှာတော့ အရေပြားအရောင်ပြောင်းမှုမတူပါဘူး။
Chilblains (သွေးကြောရောင်ရမ်း၍ကိုက်ခဲခြင်းတစ်မျိုး) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါအမည်တပ်ခြင်းက ရှင်းလင်းပါတယ်။ အအေးဒဏ်ထိထားတဲ့လူတစ်ယောက် တူညီတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် chilblains လို့ရောဂါအမည်တပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။
တခြားသော ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ lupus, Raynaud’s phenomenon, erythromelalgia တွေနဲ့ သွေးငတ်ခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်းပယ်ပါလိမ့်မယ်။
ရှားရှားပါးပါး ရောဂါခွဲခြားရခက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အရေပြားအသားစစစ်ပါလိမ့်မယ်။
Chilblains (သွေးကြောရောင်ရမ်း၍ကိုက်ခဲခြင်းတစ်မျိုး) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လိမ်းဆေး – ခရင်လိမ်းခြင်း
သွေးဖိအားဆိုင်ရာဆေးများ – ကဲ့သို့ သွေးဖိအားနည်းစေသောဆေးများ – သွေးကြောပွင့်စေပါတယ်။
အအေးဒဏ်ခံပြီးနောက် မနှိပ်၊ မပွတ်သပ်၊ အပူမပေးဘဲ အသာအယာသာပြန်လည်းနွေးထွေးစေခြင်း
ထိခိုက်သောနေရာကိုခြောက်သွေ့နွေးထွေးအောင်ထားခြင်း၊ သို့သော အပူဓါတ်ကနေဝေးဝေးမှာတော့ရှိရပါမယ်။
Chilblains. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chilblains/home/ovc-20165478. Accessed August 14, 2017.
Chilblains. http://www.nhs.uk/conditions/chilblains/Pages/Introduction.aspx. Accessed August 14, 2017.
Chilblains: Causes, symptoms, and treatments. http://www.medicalnewstoday.com/articles/172191.php. Accessed August 14, 2017.
Chilblains. https://patient.info/health/chilblains. Accessed August 14, 2017.
Diabetic Retinopathy (ဆီးချိုရောဂါ ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော မျက်လုံး၏အာရုံကြောရောဂါ)
Dry eyes (မျက်လုံးခြောက်ခြင်း)
diabetic neuropathy (ဆီးချိုရောဂါကြောင့်ဖြစ်သောအာရုံကြောရောဂါ)
ကျန်းမာရေးစင်တာ (EN), ကျန်းမာရေးအားလုံး, ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ
Bowel obstruction (အူပိတ်ခြင်း)
Gaucher’s Disease (ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများတွင် အဆီစုပုံခြင်း)
ကျန်းမာရေးအားလုံး, ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ, ကိုယ်ဝန်ဖွံ့ဖြိုးခြင်း, မိခင်ကျန်းမာရေး, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
Cholestasis of pregnancy (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကြုံရတတ်တဲ့ယားယံခြင်းအကြောင်း)